दुर्गम जिल्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई कहरः दुईहप्तासम्म पाठेघर मै साल |
दुर्गम जिल्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई कहरः दुईहप्तासम्म पाठेघर मै साल
प्रकाशित मिति :2016-09-25 12:32:34
बाजुरा । मुगुको धैनकोट ९ तलिवाडाकी ३० वर्षीया नानी देवी मल्लको सुत्केरी भएको १४ दिनपछिसम्म साल नझरेपछि उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याइएको छ । बच्चा जन्मेपनि साल पाठेघर मै अड्केपछि उनको अवस्था गम्भिर भएको थियो । १४ दिनपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको पहलमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले ४ लाख रुपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गरेपछि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ ।
घरबाट स्वास्थ्य चौकी जाने बेला उनले बाटोमा बच्चा जन्माएकी थिईन् । बच्चा जन्मिएपछि उनलाई स्वास्थ्य चौकी नलगी घर फिर्ता लगिएको थियो । बच्चा जन्मियो तर साल आएन्, बच्चाको पनि चौथों दिनमा मृत्यु भएको उनका श्रीमान धनराज मल्लले वताए ।
घरमै राखेकी नानीलाई ४ दिनसम्म पनि साल नआएर उनको अवस्था गम्भिर भएपछि नजिकै बाजुरा जिल्लामा रहेको रुगिन स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न आफन्तले पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले साल निकाल्ने प्रयास गरे, तर सम्भव नभएपछि कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अन्यत्र लैजान भनियो । तर आर्थिक अभावका कारण श्रीमानले उनलाई फेरी घर लगे ।
नानीको अवस्था निकै गम्भिर हुँदै गएपछि धनराजले उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजान ऋण खोजे तर पाउन नसकेपछि तीन हजार रुपैयाँमा १२ दिनपछि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याए । कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याएपनि नानीको अवस्था निकै गम्भिर भइसकेको थियो । उनको यौनीबाट पीप बगिरहेको थियो । यहाँ उपचार हुने सम्भावना नभएपछि नेपालगञ्ज रिफर गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. विकल लामिछानेले वताए ।
कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले नेपालगञ्ज रिफर गरे पनि लैजाने साधन थिएन । त्यो दिन दिनभरी कोल्टी विमानस्थलमा एउटा पनि जहाज आएन ।
मुगुको धैनकोट तलिवाडाकी नानी देवी मल्ललाई शुक्रवार हेलिकप्टर चार्टर गरेर नेपालगञ्ज लगिँदै । तस्बिरः प्रकाश सिंह
फेरी बेलुकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा फिर्ता लगियो । नानीको अवस्था निकै नाजुक हुँदै गएपछि उनको वीवन रक्षाका लागि हेलिकप्टर चार्टरका लागि पहल शुरु गरेको डा. लामिछानेले वताए । हेलिकप्टर चार्टर भएपछि उनलाई १४ दिन पछि भेरी अञ्चल अस्पतालमा पु¥याएर उपचार सुरु भएको छ ।
नानी मल्लको अवस्था निकै गम्भिर भएको खबर पाएपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा गरिएको पहलपछि ४ लाख रुपैयाँमामा हेलिकप्टर चार्टर गरेर उनले उपचार पाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. मोहन नाथले वताए ।
क्षेत्रीय निर्देशनालयसँग निकै पहल र विमान कम्पनी सकारात्मक भएपछि नानीको ज्यान बचाउन सफल भएको नाथले वताए । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका शिद्धराज भट्टका अनुसार सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको उद्धारका लागि यो वर्ष वजेट जम्मा ५ लाख रुपैयाँ थियो, ४ लाख नानीका लागि खर्च भएपछि अव यस्तै समस्या परेका अन्य महिलाको उद्धार नपुग्ने वताए ।
बच्चा जन्माउन समयमै स्वास्थ्य चौकी नलैजानु र साल नआएको धेरै दिनसम्म घरमा राख्नाले नानी मल्लको अवस्था निकै गम्भिर भएको फेज नेपालमा कार्यरत स्टाफ नर्स कोपिला सिलवालले वताइन् । दुर्गम तथा पछाडी परेका समुदायमा अहिले पनि घरमै बच्चा जन्माउँदा धेरै महिलाको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ ।